Duulimaadkii ka bixi jiray Garoonka muqdisho oo manta hakad galay « AYAAMO TV
Duulimaadkii ka bixi jiray Garoonka muqdisho oo manta hakad galay by Maamule sare 1 of 1
575 Views Date February 3rd, 2014 time 9:59 am
Waxaa Maanta Garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde ee Magaalada Muqdisho hakad ku jira duulimaadyadii diyaaradaha ee maalin walba kasoo dagi jiray iyo kuwii ka duuli jiray.
Sargaal katirsan Shaqaalaha Garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde ayaa noo sheegay in saakay la waayay Shidaalkii diyaaradaha ay isticmaali jireen taasina ay sababtay in maanta hakad galaan duulimaadyadii garoonka.
Waxaa saakay garoonka taagnaa oo la qorsheenayay in ay ka duulaan diyaarado ay kamid yihiin Turkish Airweys , Uganda ,Airweys iyo kuwa kale ,Diyaaradhaaa oo gabi ahaan waayay shidaal ay garoonka kaga duulaan , waxaa sidoo kale baaqday diyaarado kale oo garoonka kasoo dagi lahaa.
Warar ay Heshay Warbaahinta ayaa sheegaya in Shidaalka Diyaaradaha ee Garoonka Aadan Cadde lagu wareejiyay Shirkad madax banaan ay leeyihiin labo Xildhibaan oo katirsan Baarlamaanka Soomaaliya.
Wali si rasmi ah looma oga sababta keentay in Shirkada la wareegtay Shidaalka Diyaaradaha ee Garoonka Aadan Cadde maanta garoonka Shidaal u geyn weysay iyadoona maanta uu hakad ka jiro shaqadii garoonka , mana kala cada in maanta gabi ahaan shaqada joogsatay iyo in dib Duulimaadka ka bilaaban doono.
Dhinaca kale Wararka aan ka heleyno Gudaha Garoonka Aadan Cadde ayaa sheegaya in gudaha garoonka ay ka jiraan biyo la’aan baahsan kadib markii uu ciladoobay ceelkii biyaha ee ku yaalay Gudaha Garoonka.
” Garoonka malahan wax biyo ah waxaana halaabay ceelkii biyaha siin jiray garoonka , Biyaha hada booyado ayaa banaanka looga keenaa mana naqaan xiliga la sameyn doono ceelka ” ayuu yiri mid kamid ah Shaqaalaha Garoonka oon la hadalnay.
Dhawaan ayey aheed markii Shirkad laga leeyahay dalka Turkiga la wareegtay howlaha Garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde ee Magaalada Muqdisho , mana la oga saameynta ay keeni karto shidaal la’aan maanta ka dhacday garoonka ee hakadka galiyay Duulimaadyada.